AZALEA HINDI: SAWIR, MUUQAAL, SHARAX, DARYEEL - SOOSAARKA DALAGGA
Ubaxa halkii barafka: Hindis ah azalea
Marka laga reebo qurxinta, Bishii December, Janaayo iyo Febraayo, waxay si aad ah u jilcan yihiin ubaxyadii oo dhan oo midabkiisu yahay casaan, casaan, caddaan iyo lilac, geedo hooseeya-duurka indian azaleas badanaa waxay keeneen hadiyad loogu talagalay fasaxyada qaboobaha.
Si kastaba ha ahaatee, si loo hubiyo xaaladaha habboon ee korniinka, ubax cusub iyo dhalmo guul leh ee dhirta soo jiidashada this oo dhan ma noqon karaan.
Dhamaan Hindisaha ah ee ku yaal xayawaanku waxay leeyihiin caleemo qoryo ah, caleemo cad, caleemaha caleemaha leh oo la isku qurxiyo iyo corollas geel ah.
Tani waxay caddaynaysaa asalkooda qaraabada ay kudhex gashan yihiin: Ka dib markii dhan, inkasta oo magacu yahay goobaha hoose ee ku yaal Hindiya, dhab ahaantii, awoowayaasha dhammaan noocyada isdhexgalka iyo qaabdhismeedka ah ee isku dhafan ayaa ah kuwa kor u kaca, oo ku sii kordhaya kaymaha buurta ee Japan iyo Shiinaha.
Meelahaas waxaa lagu gartaa maqnaanshaha qorraxda iyo qabowga, qulqulka, laakiin hawo nadiif ah oo la dhaqo roobab badan.
Dhalashada faraha badan ee awoowayaashan duurjoogta ah waxay u baahan yihiin microclimate isku mid ah, xitaa haddii ay yihiin, oo ay ugu mahadcelinayaan guusha xulashada, qurux badan leh midabyo kala duwan, marxaladaha kala duwan, dharka labalabka midabada leh iyo carafka guga.
Indian Azalea - daryeelka guriga
Waxaa lagama maarmaan ah in la bixiyo dhalaalaya, laakiin isla markaaba iftiinka kala firdhisan, gabi ahaanba aan lahayn iftiin toos ah.
Qalabka ugu fiican bari iyo galbeed.
Inta lagu jiro "maalmaha xagaaga" ee hawada furan ee azaleas waa in sidoo kale loo dhigaa hooska.
Heerkulka heerkulka ee ugu wanaagsan xagaaga waqtiga - laga bilaabo 18 ilaa 24 shahaadooyinka xilliga jiilaalka 10-14 Darajooyinka, laga yaabo inay hoos u dhacaan shan iyo shan.
Hindisaha Hindida ah maaha mid cabsi badan, oo joogaya hawada cusub laga bilaabo gu'ga ilaa dayrta waa mid aad u faa'iido badan - laakiin waxaad u baahan tahay inaad guriga geeysid ka hor intaadan diirin kuleylka dhexe.
Warshadu waxay u baahan tahay hawo fiican oo qoyan waxayna u baahan tahay daaweyn joogto ah. Xilliga ubaxa, boodhka biyaha waa inaanay ku dhicin ubaxyada iyo burooyinkeeda, maaddaama dhibco madow ay muuqan karaan dusha sare.
Kobcin wanaagsan iyo horumar ayaa ku siin doona ciidda leh fal-celin astaamo ah. Tani waa ciid u diyaar ah for azaleas ama mid ka mid ah xeryaha soo socda:
laba qaybood oo dhul ah, qayb ka mid ah peat iyo qaar cakiran;
peat, caleen, heather iyo dhulka dhaadheer oo loo siman yahay marka loo eego ciidda aan dhab ahayn.
Meelaha wareejinta leh godka dushooda waa inay ahaadaan ballaadhkeeduna waa ballaadhan yahay - loogu talagalay nidaamka asaasiga ah.
Cabbirkiisu waa inuusan noqon mid xad dhaaf ah - azaleas ayaa si tartiib ah u kobcaysa dhulkuna ma ahan "maareeyaa" by warshadu waxay noqon doontaa ilaha geedi socodka pathogenic.
Qeybta hoose ee weelka ayaa loo baahan yahay lakabka dheecaanka laga bilaabo dhoobo ballaaran ama dhagaxyo yar yar.
Marka degitaanka ayaa ugu wanaagsan badbaadi dhulkailaalinta xididka jilicsan ee jilicsan.
Daaweynta dhulka waa in ay fiiro gaar ah u lahaadaan booska xididka jilicsan: waa in aan lagu daboolin dhulka, tani waxay keenaysaa dhimashada geedka.
Dhalinyaro azaleas waa la bedelayaa sannadkiibaiyo baaluq - hal mar 2-3 sanohalka dheriga cusub uusan aheyn mid ka weyn kan hore.
Habka wareejinta waa inuu ahaado beddelashada - oo buuxa, haddii ay suurtogal tahay, ilaalinta jilitaanka hore ee dhulka.
Waa inay noqotaa mid joogto ah xaji ciidda ku filan, waraabinta ka dib lakabka sare ee sare u daadsan, laakiin ka fogaanshaha xad-dhaaf, joogitaanka joogitaanka qoyaanka.
Biyaha u baahan tahay in la isticmaalo jilicsan - Biyaha si fiican u degan, iyo xitaa ka sii wanaagsan - roobka, dhalaalaya, webiga, laakiin, xaalad kasta, ha qabow. Si loo ilaaliyo fal-celinta acidic ee ciidda, dhowr kristaan ​​ayaa si gooni ah loogu daraa biyaha waraabka. citric acid.
Maqnaanshaha ciidda looma oggola.: jilicsan xididada khafiif ah, oo si toos ah u hooseeya dusha sare ee ciidda, waxayna hubaal ahaan doonaan.
Xilliga gu'ga-xagaaga ee koritaanka firfircoon, hal mar asbuucii, Indian azaleas waxaa lagu quudin jiray bacriminta ay ku jiraan cusbooyinka ammonium loogu talagalay iyaga - sulfate iyo nitrate, superphosphate iyo sulfil potassium.
Xilliga dayrta iyo xilliga qaboobaha, inta lagu jiro muddada gaabinta iyo samaynta budo, bacarimiso superphosphate waxaa lagu talinayaa.
Koritaanka iyo manjooyin
Kobaca sanadlaha ah ee dhirta kuwaas aad u yar; Dhirtaas joogtada ah, oo loogu talagalay nolol aad u dheer.
Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale u baahan yihiin manjooyin. Waxaa la fuliyaa ka dib markii ubax, foomka taajka ah qaabka baadiyaha ama geed, ka saara caleemaha aad u baxsan ama daciif ah.
Xilliyada xagaaga iyo caleemaha xilliga dayrta ayaa sidoo kale la isku daraa si ay u abuuraan xaaladaha ah ubax badan.
Kartida azaleas si ay u koraan wakhti dheer, si fiican u ubaxyada iyo jawaab to gooyaa by sii kordhaya taajka qaabka la doonayo waxay ka dhigtaa jecel ee mulkiilayaasha Japanese bonsai.
Xilliyada isdaba jooga, waxay kuxirantahay kala duwanaanta, waxay dhacdaa Diisambar-Janaayo, Janaayo-Maarso iyo Febraayo-Abriil.
Si ay u noqoto mid si joogta ah u shaqeeya,
Isla markiiba ka dib ubax, sida ugu dhakhsaha badan May, azaleas yihiin caleemo, iyo caleemaha yar yar, iyaga oo xoqin, 4-5 caleemo waa la hayaa. Ka saar caleemaha kuwaas oo ka soo baxaya soo socda ee ku hari ubax
Bishii Oktoobar-Disembar, marka caleemaha la dhigay, waxaa ku jira dhirta 6-10 digrii, iyo Janaayo-Febraayo, si ay u kiciyaan ubax, 15-17.
Bloom ayaa dheer haddii ka dib marka la soo bandhigo midabada koowaad, heerkulka ayaa yaraa la yareeyaa, iyo wixii hoos u dhacay ayaa si joogto ah looga saaraa.
Dhaqdhaqaaq qoleed oo badan oo Hindiyaan ah ma fududa - labadaba miraha iyo khudraddaSi kastaba ha noqotee, beeralayda ubaxa ah ee ubucda waxay ku guuleystaan ​​labada dhinac Daabacaadda abuurka, taas oo astaamaha dhirta asalka ah ay isku dhafan yihiin oo kala qaybsan yihiin, waxaa badanaa loo isticmaalaa jilciyeyaasha kuwaas oo ku beeraya noocyo cusub oo raaxo leh. Inta lagu jiro dhalmo by gooyn, sida qaybta ah ee baadiyaha, tayada varietal ee warshad hooyada waa la ilaaliyaa.
Beeridda waxaa lagu fuliyaa isku dar ah ciidda acidic ah oo ka kooban peat iyo qayb ahaan caleemaha pine, xoogaa budada abuur ah. Daboolida polyetylensoo bandhigaan meel guduud ah, sida miraha azaleas dhalatada oo kaliya marka ay iftiimaan. Heerkulka waa inuu ahaado 18-24 digrii, waa inaad sidoo kale ilaalisaa substrate iyo hawada inta lagu jiro xaalad qoyan. Waqtiga firaaqada aad ayuu u kala duwan yahay - laga bilaabo toddobaad ilaa laba bilood. Ka dib markii qaybta ugu badan ee abuurka ku dhalan doonaa, waxay si tartiib tartiib ah looga sii daayo aqalka dhirta lagu koriyo oo lagu yareeyo heerkulka. Waraabiyo ku filan, laakiin aan xad-dhaaf ahayn, haddii kale caleemaha cagaha madow. Haddii maalinta ay gaaban tahay, waxaad u baahan tahay inaad qabanqaabiso iftiin ilaa 16-18 saacadood. Marka waraaqaha ugu horreeya ee muuqda ay muuqdaan, geedo waa la fadhiya.
Waqtiga ugu fiican ee la gooyaa gooyn - guga iyo xagaaga (Maarso-Juunyo). Waa inay noqdaan nuurad, shan ilaa siddiiq mitiritir dheer. Waxaa lagu baaraandegaa xidid-korriin iyo kiciyaasha kobcinta, ka dib, taas oo, sii kordhaya by 2 cm, waxaa la dhigayaa on rooting ee carrada acidic - dhulka leh irbadaha rotated ama peat sare. Ku dabool faashadda "polyetylene", hawo, biyo iyo buufin. Waqtiga ay qaadato jirida si aad u samaysato xididdada ugu horeysa waxay ka bilaabantaa hal bil iyo badh bilood, iyo geedi socodka rooting kama dambaysta ah iyo formation of caleemaha cusub waxay qaadan kartaa ilaa lix bilood.
Kala soocid iyada oo loo qaybinayo baadiyaha.
Saddex-afar geed azalea waxaa loo qaybin karaa qaybo kala duwan oo loo kala qaybin karo weel kala duwan.
UhHawlgalkani wuxuu u baahan yahay taxadar aad u ba'an sababtoo ah nugulaanta sii kordheysa ee nidaamka xidid la'aanta ah ee Hindiya.
Leaves dayrta - Qalab qallalan, hawo qorrax leh, qorraxda.
Wuxuu tagaa talooyin qurux badan - biyo waraab ah oo adag.
Ubaxa liita - xaaladaha heerkulka la jabiyay.
Recently dhawaan ku iibsatay azalea caleemo iyo burooyinkeeda - diiqadaynta is-dhexgalka.
Caleemaha caleemaha ayaa caleemaha caleenta ku daatay - carrada acidified.
Haddii dhammaan cilladaha daryeelka la baabi'iyo, dhirtana waxaa la siiyaa xaalado aan fiicnayn ee horumarinta, wax yar maaha cudur.
Caarada dhaadheer, cadceeda, miyuusbarku waxay ku noolaan kartaa daciifka azaleas, gaar ahaan marka hawadu aysan ku filnayn qoyaan.
Habka ugu dhaqsiyaha badan ee loola dagaalamo noocaan soo noqnoqda ayaa ah isticmaalka sunta cayayaanka.
Daryeelka habboon, taas oo, si dabiici ah, u baahan doona dadaal ku habboon, azaleas kori karo oo horumarin kartaa dhaqanka qolka sanado badan, iyo da'da waxay u Bloom badan iyo si ka weyn.
Eeg sawirro badan oo ka mid ah Hindiya cadaanka ah:
Waxaad ka akhrisan kartaa waxyaabaha kale ee mawduuca ku saabsan iyo wax badan ka baran kartaa azaleas / rhododendron:
Azalea - qurxinta qaboobaha ee daaqada daaqadda
Caucasian - bogsiinta guryaha iyo quruxda aan caadiga ahayn!
Japanese - qurxinta beertaada!
Indica - furricious, laakiin aad u qurux badan!
Shuruudaha iyo xaaladaha geedka
Maxay u xanuunsanaysaa? Sidee loo tirtiraa cayayaanka?
Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato jiilaalka?
Siberian Rhododendron Dahurian ee beertaada
Sidee loo ilaaliyaa dallaga beerka ka yimaada cudurada iyo cayayaanka?
Codsiga aqal-caafimaadeedka guriga
Hababka dhalmada ee guriga